ABS Material High Temperature Resistant Waterproof UHF Anti-metal Tag, ABS Material High Temperature Resistant Waterproof HF Anti-metal Tag, ကို ABS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် waterproof RFID Anti-သတ္တု Tag ကို
ကို ABS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် waterproof RFID Anti-သတ္တု Tag ကို
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို ABS Material High Temperature Resistant Waterproof HF Anti-metal Tag, ကို ABS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် waterproof RFID Anti-သတ္တု Tag ကို, ABS Material High Temperature Resistant Waterproof UHF Anti-metal Tag
သက်ဆိုင်အကြိမ်ရေ: HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ISO ကို 14443 TypeA, EPC C1 ဟာ GEN2, ISO ကို 18000-6C
Reading အကွာအဝေး: ကြိမ်နှုန်းမြင့်: 1~ 10cm (အကွာအဝေးစာဖတ်သူကိုအာဏာနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာနှင့် tags များ polarization ကိုဦးတည်ချက်)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF: 9m မှတက် fixed စာဖတ်သူများ;3မီတာအထိလက်ကိုင်စာဖတ်သူများ (အကွာအဝေးစာဖတ်သူကိုအာဏာနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာနှင့် tags များ polarization ကိုဦးတည်ချက်)
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ: ဖျက် 100,000 ကြိမ်
ဒေတာကို retention ကို: 10 နှစ်ပေါင်း
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် / စိုစွတ်ခြင်း: -25℃ ~ + 50 ℃ / 20%~ 90% RH အ
Operating အပူချိန် / စိုစွတ်ခြင်း: -50℃ ~ + 60 ℃ / 20% ~ 90% RH အ
အလွှာပစ္စည်း: ကို ABS
antenna ပစ္စည်း: ပေ + အလူမီနီစွဲ
အရွယ်: 8741 × 8 မီလီမီတာ×
ABS material high temperature resistant waterproof UHF anti-metal tags, is an electronic tags suitable for metal environment applications. The electronic tags can be mounted on any media surface (including metal) and can be applied to various applications such as metal, ပလပ်စတစ်, သစ်သား, စသည်တို့ကို, even liquid tanks. It can be quickly identified by the RFID card reader. The mounting method can be fixed by the mounting hole of the label, or it can be installed with the label backing paste.
Clothes tag and packing box general logistics or assembly line production, personnel attendance, စသည်တို့ကို.
prev: ကို ABS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် waterproof RFID Anti-သတ္တု Tag ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ရေမြှုပ် Anti-သတ္တု Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF မြှုပ် Anti-သတ္တု Tag ကို
RFID Cylinder အီလက်ထရောနစ် Tag ကို
အပြည့်အဝသတ္တု Anti-ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို
LF / HF Reader ကို (23)